Yakanakisa Proxy Sites - Chinyorwa chePamusoro 27 Proxy Servers - WebSetNet
Homepage / bing app for ios / Nzvimbo dzepamusoro dzeProxy - Rinzvimbo dzeVashandi Vemuproxy Mafambisi Apamusoro
Wati wakambozvibvunza here kuti ruzivo rwuri kutumirwa sei kune chako chishandiso kuburikidza neinternet? Chinhu chekutanga chaunofanira kuyeuka ndechekuti chero chishandiso chakabatana neinternet chine IP Kero, kana Internet Protocol Kero. Fungidzira iyo IP Kero seye chaiyo kero - semuenzaniso, kana iwe uchida kuona imwe webhusaiti, ipapo iyo Server yewe webhusaiti inozotumira yako IP Kero ruzivo rwese: iyo mifananidzo yekuisa, dhizaini, uye zvese zvezvinhu zviripo pane peji rewebhu, kungo taura mashoma. Pasina IP Kero, kutaurirana pakati pemidziyo miviri yakabatana kunetiweki kunenge kwakaoma, kunyangwe iri komputa kukombuta, komputa kune server kana kumwe kumisikidzwa. Iyo sisitimu yakanaka kwazvo asi kwete isina mapako ayo.
IP Kero uye Firewalls
Yako IP Kero iri kazhinji kazhinji kwete, zviri nyore kuona nemawebhusaiti iwe aunoshanyira. Wati wamboona here kuti kana iwe ukashanyira mamwe masaiti, zvaizoratidza diki mureza wenzvimbo yako pane imwe nzvimbo pairi? Zvakanaka, ndiyo webhusaiti yekutevera kuti ndeipi yako yazvino IP Kero - uyezve, inogona kuratidza nzvimbo yako yazvino kana wako wekupa internet webasa. Asi usaise heti dzako dzematehwe parizvino uye kudzima komputa yako, kune akatiwandei ezvidziviriro akavakirwa mukati. Mazhinji zvishandiso semakomputa, mafoni, maseva uye ma routers ane firewalls akaisirwa pavari. Mafirewall ndiwo madziro anomisa kubvumidzwa kusingatenderwe kubva pakuwana komputa yako munzira dzawo.
Firewalls akakura uye ese, asi ziva kuti anoshanda ese ari maviri nzira. Firewalls inogona kumisa zvese zvinouya uye zvinobuda traffic kubva kune komputa yako kuenda kune internet. Uye iri kushandiswa muzvikoro uye mumahofisi. Iwe unogona kunge wakasangana nekutadza kuwana Facebook kuchikoro kana kutadza kupinda kuYouTube kubasa uye honzeri pano ingangove nzira yekuti firewall yako inomisikidzwa sei. Zvichienderana nezvakanaka sei timu yako yeIT kunzvimbo yako, kuenda kupfuura ichi firewall kunogona kubva kubva pakutamba kwevana kusvika padanho rekubira. Kune akawanda akareruka madhairekisheni kunze uko maitiro ekuita zvekutamba zvemwana, asi kana iwe wakanamatira mune rute uye hapana chimwe cheicho chiri kushanda, saka ngatipindei kune mamwe epamberi matanho.
Imwe yeaya madhiri ndiko kushandiswa kwema proxy saiti. Saiti yeProxy inogona kukubvumidza iwe kuti utumire uye ugamuchire ruzivo kubva kune akasiyana mawebhusaiti uye maseva pasina kunyatso kuenda kune iwo masosi uye maseva. Ivo chaizvo 'vanonyengera' yako firewall kana mafirita ayo ari kumisikidzwa pakombuta yako kana network kuti iwe urikuenda kune inotenderwa webhusaiti, asi iwe uri kunyatsoshanyira kune yakavharirwa saiti. Kana iwe wakamboona iyo "Peji haigone kuratidzwa" kukanganisa, saka ma proxy saiti anogona kukurerutsira iko kukanganisa. Kune akawanda mabhenefiti anokonzerwa nerudzi urwu rwekubatana.
Imwe yemabhenefiti ekushandisa saiti yeproxy ndeyekuti inogona kupfuura iyo firewall iyo setup pane komputa yako kana network; zviri nyore nyore uye zvine njodzi nzira yekuwana zvemukati izvo zvingadai zvisingawanikwe kwauri. Imwe bhenefiti yakakura yekushandisa proxy saiti ndeyekuti inogona kuviga yako yazvino IP kero saka haufanire kunetseka nezve kuteverwa, kunyanya nemawebhusaiti aunongwarira. Inogona kutoita webhusaiti Tenda kuti urikuedza kupinda mukati uchibva kune imwe nyika. Kana iwe uchida kuvhura mawebhusaiti, mapeji, kana maapplication anowanikwa kune dzimwe nyika chete, ipapo webhusaiti webhusaiti inogona kuita hunyengeri. Kuti ushandise zvinoshanda, vamwe Mugovera Night Live mavhidhiyo muYouTube akanyatso kuvharirwa kunze kweUS asi kana ukashandisa proxy saiti yeUSA ipapo iwe unozogona kutarisa uye kuseka. Proxy inogona zvakare kubatsira mukumhanyisa kurodha kumhanya kwewebhu webhusaiti iwe yauri kuyedza kuvhura. Zvichienderana neako internet webasa mupi, proxy inogona kusimudzira zvakanyanya yako internet ruzivo, uye kunyange kugadzirisa ping yako kana latency kana iwe uri mumakwikwi emitambo.
Uye uku kuri kungokwenya musoro wenyaya. Iwe unogona kuda kuziva nezvese mashiripiti anoitika kuseri kwezviitiko, isu tichakurukura izvo mushure me urwu runyorwa rweakanakisa proxy saiti.
Kune akawanda ma proxy saiti. Zvimwe ndezvemahara, zvimwe zvakabhadhara maficha nezvimwe zvekuwedzera, uye zvimwe zvinotyisa uye zvinogona kukanganisa kuchengetedzeka kwako. Saka takaita tsvagiridzo yedu uye tawana akawanda emasaiti saiti ari kushanda sepanguva yacho. Kunyangwe iwe uchitsvaga proxy saiti yeUSA, proxy saiti yeCanada, kana proxy saiti yeIndia, isu takakufukidza. Tinokuzivisa iwe zvatinofunga pamusoro peumwe neumwe kuti iwe ugone kuita sarudzo yakadzidziswa yekuti uchafambisa sei internet netayera.
Yakanakisa Proxy Sites
Iko hakuna yakanakisa proxy server, yega yega ine zvayakanakira nezvayakaipira asi isu tine edu mazano. Izvi hazvisi mune zvakarongeka uye isu takave nechokwadi chekuti vese vari kumusoro uye vanoshanda sezvino. Unogona kuona kuti kune mamwe masaiti ane akafanana mushandisi interface (UI) kune mamwe mawebhusaiti, izvo zvakajairika sezvo mamwe ma proxy saiti anoshandisa zvakafanana frameworkkana proxy server mupi asi ivo havana kufanana. Isu takavewo nechokwadi chekuisa kwete kwete chete "epamhepo" mawebhusaiti mawebhusaiti, asi uye mamwe mawebhusaiti ane hukama nzvimbo zvakare. Ngatinyurire mukati chaimo.
Iyi proxy saiti yakanaka kwazvo chingwa chako uye saiti proxy saiti. Nechingwa uye bhotela, ine zvese zvakajairika proxy maficha ane yakaisvonaka UI iyo isinganyanyo kuvhiringidza. Zvinoita kuti zvive nyore kwauri kuti ushanyire nzvimbo dzako dzaunofarira nekuti ine mabhatani ekukurumidza ekuwana Facebook, Google, YouTube, pamwe nedzimwe nzvimbo dzinowanzo dzivirirwa dzakadai seReddit. Chinhu chinozivikanwa ndechekuti ine zvakawanda zvingasarudzwa zve IP kero; iwe unogona nyore kutora IP kero yeUS uye EU. VaCanada vanofara nekuti uye kuyedza kuwana masaiti kubva kuUSA kana kuEurope, saka uyu mumiriri mukuru weproxy saiti yeCanada.
Kumucheto: haugone kusarudza kuti ndeipi nzvimbo muUS kana EU ichasarudza saka ungangoda kuzorodza kana iwe ukawana isingadiwe IP nzvimbo.
Pinda Proxysite pano: proxysite.com
Chimwe chezvinhu chandainakidzwa nekushandisa FilterByPass.me ndechekuti yakatakura zvinhu nekukurumidza kupfuura mamwe akawanda ma proxy saiti. Iyo inowanzo iine zvese zvekutanga maficha uye Iyo ine yakasarudzika UI yeFacebook saka kana iwe uine inononoka internet yekubatanidza, iwe ucharamba uchikwanisa kuwana Facebook.
Kumucheto: Iwe unofanirwa kudzima yako ad-blocker kutanga nekuti hauchakwanise kuenderera kumberi kupfuura peji rekutanga kana rikabvumidzwa. Izvo zvakare hazvitsanangure kuti server ichabatana nei, kunyangwe iyo nzvimbo yakajairika (US kana EU).
Tsvaga FilterByPass.me apa: filterbypass.me
Mune ino runyorwa, ese mawebhusaiti haasi hazvo proxy saiti per se; dzimwe nguva ndeye proxy mupi. 4everproxy muenzaniso uye inopa iyo proxy sevhisi kune akawanda mamwe mawebhusaiti. Unogona kutaura sekunge iri amai proxy saiti. Asi iwe unenge uchiri kupihwa yakagadziridzwa runyorwa rweanoshanda anoshanda mawebhusaiti iwe aunogona kuwana nekukanya bhatani
Kumucheto: Haisi yakananga proxy saiti asi iwe unogona kuwana mamwe masaiti kuburikidza pano.
Pinda 4everproxy apa: 4everproxy.com
Skullproxy inokwikwidza kune avo vanongotarisa kuwana masaiti anowanikwa kune ese uye kwete hazvo mawebhusaiti akakiyiwa. Iyo ine inokurumidza kuwana zvinongedzo kune zvakajairwa masaiti pamwe neiyo huru UI. Kana iwe ukaramba wakanamatira muchikoro kana kubasa uye urikutsvaga kupinda paFacebook kana iwe waingoda kuGoogle chimwe chinhu, saka saiti iyi yakanyatso gadzirirwa iwe.
Kumucheto: Kunge mamwe masaiti pane ino runyorwa, haina server zvingasarudzwa. Pamusoro pezvo, isu takaedza Facebook uye yakashanda, asi Netflix yaive nedambudziko rekusimudza uye pakupedzisira haina kutitakurira zvachose.
Tsvaga skullproxy apa: skullproxy.com
Iyi webhusaiti ndeye yemushandisi wemagetsi, zvichireva kuti iwe unonyatsoda kuve nechokwadi chekuti maturu ako anogara akafukidzwa. Tinodaro nekuti iwe unokwanisa kubva ipapo kubva panzvimbo kuenda pane imwe nekukanya kamwe chete. Proxify zvakare ine maseva makumi mana nemasere aunogona kubatana nawo. Iyo zvakare ine mwero wekubhadharisa maficha, saka kana iwe uri tech savvy nezve maitiro aunoita nezve yako internet bhizinesi, saka isu tinokurudzira zvikuru ino saiti iwe. Nyore, iyi ndiyo chaiyo proxy saiti yeUSA vashandisi veinternet.
Kumucheto: Iyo yakabhadharwa proxy sevhisi inodhura US $ 20 yemasevhisi makumi mana nemasere uye nekukurumidza chinja nzvimbo maficha.
Tsvaga proxify pano: proxify.com
Pamasaiti ese epano, Whoer.net yakanyatsotinetsa kana zvasvika pane zvingasarudzwa. Iyo yakanangana chaizvo kana zvasvika kumaseva, uye kana tichiti maseva, tinoreva dura rese remaseva. Kana iwe wakamboda kuve ne IP kero inouya kubva kuParis, Moscow, New York kana London, saka ino proxy saiti zvechokwadi inotora keke. Kana iwe usiri kuda kukanganiswa nekutora sarudzo kana zvasvika kumaseva, pane yakasarudzika server sarudzo. Uye nemufaro kwatiri, Netflix yakakwidziridzwa hapana dambudzikoo.
Kumucheto: Peji rega rega raunoshanyira rine hombe chikwangwari kumusoro kuratidza kwavo VPN sevhisi. Haisi iyo chaiyo pfungwa yedu yekufadza inofadza.
Pinda Whoer.net apa: whoer.net/webproxy
Proxfree ndeye godend kune avo vanoda mhedzisiro ipapo ipapo. Ino proxy saiti ine rakakura rakakura katarogu yemaseva aunosarudza kubva, anoiisa pamusoro pemazano edu, asi chakanyatsotibata apa ndechekuti inonyatsokuratidza iyo ping kune mumwe nemumwe. Kana iwe wakamboedza kutamba mitambo yevakawanda pane yako webhu bhurawuza saka unoziva kuti izvi zvakakosha sei. Ingosarudza sevha ine yakaderera ping uye iwe unoziva kuti iwe wakangosarudza rakanakisa sevha inoenderana nekubatana kwako. Iyo inotakura zvirinyore nzvimbo kubva kunzvimbo yedu, saka tinogona kutaura kuti ndiyo inotyisa saiti yekumirira yeIndia uye chero kuSouth neSoutheast Asia.
Kumucheto: Iyo UI yaigona kushandisa zvishoma zvishoma basa uye Netflix zvaisakwanisa kutakura kumusoro.
Tsvaga Proxfree pano: proxfree.com
Kusiyana nenzvimbo zhinji dzesosi dziri pane ino runyorwa, Netmap.su iri kunyanya mu Cyrillic chinyorwa (kana iwe uchiziva chiRussia, iri harisi dambudziko). Havasi vanhu vazhinji vari kuda kutora pombi nesaiti iri mune mumwe mutauro, asi avo vakashinga zvakakwana kuti vayedze vachakwanisa kuwana proxy maseva muBulgaria, Russia, Australia uye shocker: Japan. Ehe, kana paine paine nzvimbo kunze uko idzo dzakanangana neJapan, saka ino ndiyo saiti yekuvemo. Uchiri nezvose zvinozivikanwa maficha, zvinova zvakanaka kuwanda mubhuku redu. Isu tinokurudzira zvikuru izvi seye proxy saiti yeChina uye nevari padhuze kana kutenderedza Russia nekuti padyo nehungwaru, kushandisa Russian server ingangoita kunge inoremerwa nekukurumidza kupfuura kushandisa sevha muUSA.
Kumucheto: Unogona kukwevera mawebhusaiti ako aunofarira muCyrillic asi iwe unogona kuzvishandura izvo nekuchinja sevha. Iwe unogona kunge uine yakareba mitoro nguva kana iwe uri kuwana ino saiti kubva kuUS.
Famba Netmap.su apa: netmap.su/proxy
Kproxy iproxy server iyo inoshanda chete. Izvo hazvikukanganise nezvose sarudzo senge SSL uye zvakadaro kubva pakuenda, asi zvichiri kuita basa racho zvakanaka. Uye kubva pane zvatakaunganidza kuburikidza neyedu yekutanga kuyedza, inofashura nekukurumidza uye hainyatsoda kumisikidzwa. Izvo zvakanaka kune vanhu vanongoda kupinda muInternet vasina zvese zvingasarudzika uye marongero, uye kune mumwe munhu asingadi hake kuve mune imwe nzvimbo geo. Kana iwe ukasarudza ino webhusaiti seyako yaunofarira saka pane zvakare mukana wekutora yavo yekuwedzera kuti ive nyore kuwana.
Kumucheto: Iwe uri murima rekuti ndeipi server iwe yauchabatanidza kune. Iyo ine akati wandei sarudzo dzemaseva asi haina kunyatsotaura kuti nzvimbo yacho ndeipi kune iro server.
Pinda Kproxy pano: kproxy.com
Mazhinji emasaiti akanyorwa pano ane akajeka mushandisi maficha, uye izvo chaizvo zvakanaka uye zvese, asi iwe unongowana chete kuona iyo yakanaka UI kamwe pane peji rekumhara. Iyo imwe 99% yenguva, iwe uri muwebhusaiti iwe yaunonyatsoda kushanyira. Megaproxy yakangwara mukuona kuti vanoisa pfungwa pazvinhu zvakakosha pane kupinda zvese muUI. Inoshandira iwo masayiti atakaedza, uye akanaka kune avo vari kuNorth America vachitsvaga proxy saiti yeUSA kana proxy saiti yeCanada.
Kumucheto: Sezvandambotaura kare, ine UI isina chinhu, iyo inogona kusazorodza vamwe, asi zvakadaro con. Iyo inogumira kuwana kwako kana iwe ukashanyira nzvimbo dzakawandisa; une yakawanda bandwidth yekushanda nayo, zvakadaro.
Pinda Megaproxy apa: megaproxy.com
Kingsurfproxy imwe saiti ine yakakosha UI, asi usarega izvo zvichikunyengera - zvine simba senge chero imwe saiti pane ino runyorwa. Chimwe chezvinhu zvinozivikanwa zvesaiti ino ndechekuti haina kukubhomba iwe nebhendi repamusoro pane webhusaiti yega yega yaunoshanyira. Izvo zvinongoratidzira iwe webhusaiti iwe yaunoda, isina bhizaplay yakasaswa pakati. Ivhavha yainobatana nayo iri muUK.
Kumucheto: Dzimwe nguva inotakura nzvimbo zvishoma nezvishoma, asi chete kune mashoma anosarudzwa.
Access Kingsurfproxy apa: kingurfproxy.com
12. Kurumidza USA Proxy
Iine mushandisi yekushandisa yakadhonzerwa kunze iyo Matrix bhaisikopo, haugone kukanganisa neiyi proxy saiti. Iyo ine ese mashandiro emamwe masosi pane ino runyorwa uye haitsamire pane inopenya UI kuendesa yakakura basa. Sporting iyo yese-nhema dema scheme, iri iro gedhi rako kune iyo yese iyo internet. Uye sekutaura kwakaita bhaisikopo, hapana chipunu - hapana zvinonetsa munzira yako newebsite ino, uyezve inotakura Google zviri nyore.
Kumucheto: Iyo UI inogona kunge iri con yevamwe. Izvo zvakare haina kukupa iwe runyorwa rwemaseva aunosarudza kubva.
Fonera FastUSAProxy pano: fastusaproxy.com
Mamwe emasaiti pano anotamba UI yakafanana kune vamwe pane ino runyorwa. Fishproxy ine zvakafanana nemadzimambo epuroyiki asi ichiri iine runako rwayo. Iwe unogona kushandisa izvi seyirasi proxy saiti kana yako yaunoda proxy saiti iri pasi.
Kumucheto: Kwete zvakawanda zvekuona pane inosvika peji, uye dzimwe nguva inogona kurodha sarudza masosi zvishoma nezvishoma.
Tsvaga Fishproxy pano: fishproxy.com
Kana isu tichigona kupa mubairo "Yakanakisa muInternet Interface" kune chero emasaiti pano, Zalmos inogona kuhwina. Kuti utsanangure kuti saiti iyi inoratidzika sei, isu tingati badass Uye sezvatakambotaura, iwe unongowana kuona iyo UI kamwe uye yakawanda yenguva, iwe uri pawebhusaiti yesarudzo yako saka Zalmos haina kungowana mamaki akakwana muUI department, zvakare inopokana mu inoratidza dhipatimendi. Iwe unowana kumhanya kwakamhanya kweye maficha maficha uyezve mamwe. Iwe une sarudzo yekusarudza pakati peFrance neNetherlands sewe server server. Yakakwana kune avo vari kutsvaga kuwana iyo internet kubva kuAsia kuenda kuEurope. Sarudzo huru yeiyo proxy saiti yeIndia.
Kumucheto: Kwete USA sarudzo pano. Uye iwe unongova nenyika mbiri dzeEU kusarudza kubva.
Tsvaga Zalmos pano: zalmos.com
Hide.me haina chete zita rakangwara rewebhusaiti, asi zvakare inopa yakanaka kwazvo proxy saiti saiti. Iwe une zvakawanda zvingasarudzwa zvekugadzirisa kuti uchaita sei kuwana internet; kunyanya, yakagadzirirwa avo vari tech savvy. Iyo saiti yakakurudzirwa kwazvo mu internet nekuda kwechikonzero chakanakisa: ine yepamusoro-notch interface uye hauzozvivhiringidza nesarudzo dzakawandisa usati wasvetukira mukushandisa chaiko proxy sevhisi. Unogona kusarudza US, ChiGerman neNetherlands IP Kero uye kune vamwe, izvo zvinopfuura zvakakwana sarudzo.
Kumucheto: Iyo webhusaiti inopa VPN pane yega yega skrini inogona kutsamwisa vamwe, asi vamwe vamwe vanogona kunge vachida kukanganisa chikamu chechina chechiso chavo kuti vawane yavo yavanofarira webhusaiti.
Tsvaga Hide.me apa: hide.me
Isu hatina kunyatso bata mamwe maAsia mune ino runyorwa uye inguva yekuti isu tigadzirise izvo. Kutaura kuti Zacebookpk yakanaka proxy saiti yePakistan ndeyekunyepedzera. Iyo proxy saiti iri zvaireva yevashandisi vePakistani. Iyo interface yakatwasuka uye haina kubvarura dally, asi nekureruka kwayo kunogara runako rwayo. Izvo zvakajairika maficha iwe aunowana pane ino saiti zvakare zvinowedzera kumusoro kune zvakanakisa sei kushanyira sezvo yanga isina kana dambudziko rekutakura YouTube uye mamwe mawebhusaiti. Zve geo-nzvimbo dzaunogona kusarudza kubva, Zacebookpk ine maseva anowanzo kuve muFrance.
Kumucheto: Chinhu chakasarudzika ndechekuti pane inogara iri bhana inoratidza saiti iri pamusoro pechidzitiro. Kune vanhu vane zvidiki zvidyarwa, zvinogona kutora makumi matatu nematatu kubva muzana pane yako skrini zvivakwa.
Pinda Zacebookpk apa: zacebookpk.com
Sporting main server muUSA, saiti ino yakanaka kune avo vari kutsvaga kuwana mawebhusaiti akakiyiwa geo ari muUSA. Imwezve huru yekuwedzera kune yayo mushandisi interface iratidziro yezvisungo kune zvakajairika injini dzekutsvaga seGoogle, Duckduckgo uye Bing. Takaedza kuwana mawebhusaiti enhau senge Facebook neTwitter nekubudirira kwakawanda. Iwe uchagara uchizivana neshamwari dzako kana ukashandisa ino proxy saiti.
Kumucheto: YouTube neNetflix hazvishande pane ino saiti. Takaedza.
Justproxy haina kubudirira mubazi reUI uye inoita chaizvo zvarinotaura pabhokisi: ingori proxy. Asi zvakare, usatongere bhuku nekavha rayo - zvakangofanana nemamwe ese masosi mune ino runyorwa neese emitero yemari yekugadzirisa uye tweaks. Iyo sevha iyo yainobatana nayo ndeye - iwe wakaifungidzira iyo - iyo UK. Takaedza YouTube tikatakura zvakanaka. Jolly zvakanaka kana iwe ukandibvunza!
Kumucheto: Inokumbira kupindura mamwe matambudziko eCAPTCHA kune mamwe mawebhusayithi akasarudzika uye dzimwe nguva iyo CAPTCHA haizotakure. Zvakadaro, iri kukwanisa kurongedza kumusoro masosi ekutanga.
Tsvaga JustProxy pano: justproxy.co.uk
Mune proxy webhusaiti nzvimbo, pane zvirokwazvo akawanda mawebhusaiti anotaridzika akafanana. Hidenseek.org ine UI yakafanana neiyo orangeproxy uye ine sarudzo imwechete kana zvasvika pakukurumidza kubatana. Ivo vanogona kwazvo kugovana zvakafanana framework kana iye chete proxy mupi. Kunyangwe zvakadaro, inoshanda zana muzana kutsvagirwa neGoogle uye kana uri muWikipedia zviitiko, ino proxy saiti yakangonaka.
Kumucheto: Kunge orangeproxy, haina zvakare kurodha YouTube neNetflix.
Kuwana hidenseek.org apa: hidenseek.org
Proxy.org imwe yemasaiti asinganzwisisike nekuti haigone kushanda seye proxy saiti asi asi runyorwa rwema proxies. Uye aya mawebhusaiti emupepeti anogona zvirokwazvo kuwanikwa nekungobaya bhatani. Kunze kwemamwe ma proxies akanyorwa pano, nekuwana saiti ino iwe yaunogona kusarudza kubva ku904 mamwe emasaiti anowanikwa. Pamaonero eUI, yakachena kwazvo uye haina chero chekuumbana. Kana iwe wauya kuzoshambadzira chero webhusaiti, saka ndizvo zvaunowana.
Kumucheto: Kune mamwe akanyorwa proxy saiti izvo parizvino zviri pasi sekunyora asi ruzhinji rweavo vakanyorwa vari kushanda. Iwe unogona kusangana nekudzoka nekudzoka kune ino webhusaiti kana iwe ukaitika kusarudza masosi ari pasi.
Tsvaga proxy.org pano: proxy.org
Kana paine paunenge uri kuChina uye usingakwanise kuwana Facebook kana mamwe ako masocial media saiti, ipapo Hidester ndiyo webhusaiti iwe yauri kutsvaga. Iyi webhusaiti inowanzoitirwa traffic inobva kuChina uye inototaura pawebhusaiti kuti ndizvo China Yakagadziriswa. Iwe une sarudzo dzekubatanidza kune ese US uye EU maseva. Iyo yakatwasuka proxy saiti iyo inobvisa hullabaloo iyo iwe yaunofanira kupfuura nedzimwe nzvimbo senge CAPTCHA matambudziko uye inoita kuti basa riitwe. Uye kudzokorora, ingangove yakanakisa mutauro weChirungu proxy saiti yeChina.
Kumucheto: Yedu chete gripe ndeyekuti iwe unofanirwa kunge uri muChina kuti ushandise zvizere saiti ino. Kubva pakuyedzwa kwedu, yakatakura zvishoma nezvishoma muSouth / Southeast Asia dunhu.
Tsvaga Hidester pano: hidester.com
Kana iwe uchida kuziva kuti zvinonzwa sei kuwana internet kubva kuSaudi Arabia, ipapo Xitenow ndiyo yako webhusaiti sarudzo. Iyo interface haina kunetsa kushanda uye iwe unosvika kune yako yakavharidzirwa webhusaiti pasina nguva. Iwe uchiri nezvose zvakakosha maficha kuburikidza ino webhusaiti, uye kune ruzhinji rwevaverengi vedu, izvo maficha anogona kunge ari ese auchazomboda iwe. Xitenow inosarudzika sarudzo kana iwe uri kuyedza kutarisa internet kubva kuNorth America uye yakavhura magariro enhau mawebhusaiti uye enjini dzekutsvaga dzakanaka zvisina mutsetse patakaedza.
Kumucheto: Sarudzo chete pano iSaudi Arabia uye dzimwe nguva zvinotora nguva kuvhura mawebhusaiti kubva kunzvimbo yedu.
Pinda xitenow apa: xitenow.com
Ivo vanogadzira kuseri kweNewIPNow vanoziva izvo zvinonyanya kukosha kune avo vanoenda kunzvimbo dzekumirira uye ivo vakave nechokwadi chekuti kushandisa saiti yavo kunetswa mahara. Pane chinongedzo cheUI, ine ese mabhatani akajairwa uye emabhokisi ezvinyorwa awakatarisira kubva kunzvimbo dzevamiririri asi zvinonyatsoshanda mubazi rezvezvinhu. Iyo inokuratidza iwe iyo ping kune yega sevha iyo iyo inobvumidza iwe kuti usarudze yakanakisa server kune yako yazvino kubatana. Iwe unogona zvakare nyore chinja IP Kero nzvimbo nekushandisa iyo yepamusoro bar.
Kumucheto: Kubva kune mawebhusaiti atakaedza, NewIPNow yaive nematambudziko kurodha mifananidzo.
Famba NewIPZvino apa: newipnow.com
Kana iwe uri muWikipedia Adventures - iri kunyanya kubhiza kubva peji kuenda kune peji muWikipedia, saka Websurf.in ndeyako, kunyanya kana Wikipedia iri imwe yemasaiti akavharirwa muchikoro chako kana muhofisi. Websurf.in ine zvese zvezvinhu zvaunogona kukumbira mune proxy saiti, uye marongero anogona kutorwa nyore nyore uye kubviswa nekudzvanya. Chinhu chakakura chine ino webhusaiti ndechekuti iwe unayo yako inokurumidza link pane yakagadzirira. Tinokurudzira iyi saiti kana iwe uchida kushandisa proxy saiti yeIndia.
Kumucheto: Iyo UI ndeyepakati uye iwe unofanirwa kupuruzira pasi kuti utange kutaipa webhusaiti iwe yaunoda kushanyira. Kwete chaizvo iyo webhusaiti iwe yaunogona kusvetukira wakananga muchiito na.
Pinda Websurf.in apa: websurf.in
Anonymouse yakanaka kana iwe uchida yekutanga 2000s webhusaiti vibe. Kunyangwe ichitaridzika kunge yekare webhusaiti, iyo inokutendera iwe kuti uwane masayiti sechero chero proxy pane ino runyorwa. Sezvo iri imwe yemasaiti ekare, mamwe maTimu eTI anokanganwa kuivhara pane network saka kana uchinetseka kuwana mamwe masayiti pane ino runyorwa, edza anonymouse uye zvinogona kungokushandira.
Kumucheto: Kukurira kukuru kune isingazivikanwe imba ndeyekuti yekubatana kwakachengetedzwa, kana mawebhusaiti anotanga neHTTPS senge Facebook, uye mamwe masocial media masosi, iwe uchafanirwa kusaina kune iyo VIP sevhisi.
Tsvaga Anonymouse pano: anonymouse.com
Iyi proxy saiti iri nyore kushandisa uye inokwana kwakawanda kutsvagiridza uye varaidzo yatinotarisa kumusoro pa internet. YouTube inotakura zvirinyore uye proxyone.net inova nechokwadi chekuti chiitiko chako chekuona chinonakidza nekutendera iwe kuti utambe uchitenderera nemhando yemavhidhiyo, kusiyana nemamwe ma proxy saiti anongopa vhidhiyo yekutanga kutamba kumashure. Kana iwe uri kurira kutarisa iyo vhidhiyo yeYouTube isiri kukuratidza iko kukanganisa "Iye arikutora haana kuita kuti vhidhiyo iyi iwanikwe munyika yako," zvadaro vhura proxyone.net uye utarise kune zvemukati zvemwoyo wako!
Kumucheto: Iyo webhusaiti dzimwe nguva iri pasi, asi iwe unogona kuzorodza uye kudzoka kwairi pane imwe nguva.
Tsvaga proxyone.net pano: proxyone.net
Usatisefa isu ndeimwe yemazano nekuti inogona kukuwanira yako webhusaiti yekusarudza isina kukubhowa nezvakawanda sarudzo. Iyo ine zvese zvema proxy saiti zvakavigwa zvine hungwaru saka kana iwe uchitsvaga kwekuwedzera chengetedzo, iwe uchine sarudzo dzekuita tweak. Iine domain yeUS saka zviri pachena kuti uone kuti yakakosha proxy saiti yevashandisi veUSA.
Kumucheto: Iyo UI haina zvakawanda zvekuona uye hapana sarudzo yekuchinja maseva. Zvinotora chinguva kutakura asi kana zvadaro, inzvimbo huru yekumiririra yekushandisa.
Uye izvo zvinotenderera yedu yazvino runyorwa rwema proxies.
Mashandiro anoita Proxy Servers
Izwi rekuti Proxy rinoreva chinotsiva uye ndizvo zvazvinoita. Iyo proxy server inogamuchira chikumbiro chako cheruzivo, inotumira icho chikumbiro kune webhusaiti server uye ndokudzosera kwauri. Imwe nzira yekuisa nayo ndeyekufungidzira iyo proxy saiti senhume. Iwe unotumira meseji kune iyo proxy saiti, iyo proxy saiti inotumira iwo meseji kunzvimbo yekuenda, iyo yekuenda saiti mhinduro, inoenda kune proxy saiti, uye pakupedzisira vadzokere kwauri. Nesisitimu ino irimo, webhusaiti yekuenda inofunga kuti munhu ari kuyedza kuwana webhusaiti yavo ndiye webhusaiti webhusaiti pane iwe. Saka mukukosha, iyo proxy webhusaiti inoshanda seinokutsiva - ndiko kuti, inobata zvese IP Kero yekutevera inoitwa neiyo webhusaiti yekuenda, kunyangwe iri kuitira kuziva nzvimbo yehuwandu hwesaiti yavo traffic kana kushandisa yako nzvimbo kupa iwe une yakakwana kushambadza. Uye kana yako yepanzvimbo IT timu yakavharira Facebook kana YouTube, asi isina kuvharira imwe yemazhinji mawebhusaiti ewebhusaiti, saka une mhanza! Ingo pinda iyo webhusaiti uye haufanire kumisikidzwa zvakare.
Proxy saiti saiti
Nesiti yega yega proxy yaunoshanyira, pane zvimwe zvingasarudzwa zvaunogona kusarudza kubva kuti uve neruzivo rwakanakisa nekubhurawuza kwako. Kune avo vasiri chaizvo mune zvese izvo IT zvinhu, izvo zvingasarudzwa zvinogona kunge zvichityisa uye zvichinyatso kuvhiringidza. Asi isu tinogona zvirokwazvo kukuvimbisa iwe kuti izvo zvingasarudzwa zvinogona kungosiyiwa zvakanganikwa uye kumisikidzwa kuzvikanganiso zvavo. Asi avo vanoda kuziva, isu ticha tsanangura nemufaro kuti sarudzo idzo dzinoshanda sei uye mune zviitiko zvipi zvavanonyanya kushandisirwa. Asi rinongova izwi reyambiro: Kunzwisisa zvese zvasarudzo zvine zvishoma kudzidza curve; asi kana iwe uchinge waziva mashandiro avo, iwe unozogona kuishandisa iwe mukana wako kutarisa zvakachengeteka uye zvakachengeteka. Heino runyorwa rwema proxy saiti marongero uye tsananguro pfupi yeimwe neimwe.
Encrypt URL - Inonyora iyo URL yeiyo peji iwe yauri kutarisa kuitira kuti irege kuve neinongedzera saiti mune yakajeka mavara. Izvi zvinobatsira kana timu yako yeIT ichikwanisa kuongorora kuti ndeapi mawebhusaiti auri kushanyira nekuvhara zita chairo resaiti netambo yemavara uye nhamba. Ratidza nemucherechedzo wetiki iyi sarudzo kana marongero pakombuta yako achivharira mamwe mazita ewebsite akaita facebook.com kana youtube.com
Rega maKuki - maKuki anogona kudikanwa pane mamwe masayiti anopindirana, senge iwo anoda kuti iwe upinde. Kana ukaremara, hauzokwanise kuisa mawebhusaiti seSpotify kana Twitter sezvo zvichizongokudzosera kuchiratidziro chekupinda. Kana ikabvumidzwa, zvakadaro, maitiro ako ekubhurawuza anogona kuteedzerwa nevashambadzi.
Bvisa Zvinyorwa - Inodzivirira kusazivikanwa kwako uye unomhanyisa peji kurodha nguva. Zvingave zvakanaka kuti uzvisiye zvisina kuongororwa asi kana ukabata sarudzo iyi, iwe unozopihwa iyo HTML chete vhezheni yewebhu peji, izvo zvinogona kukanganisa zvimwe zvezvinhu zvewebsite iwe zvauri kuyedza kuwana.
Bvisa Zvinhu - Zvinoderedza peji rako mutoro nguva nekubvisa zvisina basa Flash, Java nezvimwe zvinhu kubva kurodha. Kana ikasiiwa isingatariswe, pane mukana wekuti kusazivikanwa kwako kukanganisike, kana uye chete kana iyo webhusaiti iri chaizvo kunze kwekutsvaga yako IP Kero uye nzvimbo. Kune mamwe makesi akawanda, siya izvi zvisina kugadziriswa, zvakanaka.
Ma proxy masayiti akanyatsoratidza kuve chinhu chakavimbika nhasi, kunyanya sezvo mazhinji ewebhu traffic anogona kusefurwa kwete chete nehofisi yako kana chikoro, asiwo neyako webhusaiti webhu. Kunyangwe iwe uchingova usingabvumirwe internet mushandisi, kana iwe uri mune yakadzama tsvagiridzo iyo inongowanikwa mune dzimwe nyika, ipapo proxy saiti ndiyo yakanaka chaiyo kubiridzira ruoko rwako. Uye nenzvimbo dzese dzemasaiti dzatakanyora pano, ingo sarudza imwe uye uzvionere wega kuti ma proxy saiti ane simba sei maererano nekuchengetedza chengetedzo yako uye nekupfuura zvirambidzo zvemuno.
Ehe mamwe ma proxy saiti anouya oenda, saka zvimwe zvezvinhu pano zvinogona kudzikira uye isu tinogona kupedzisira tawedzera zvimwe munzvimbo dzazvo. Saka usazvidya moyo! Kana yako saiti yaunofarira iri pasi, siya mhinduro pazasi uye timu yedu yenyanzvi ichatsvaga yakanyanya inotyisa proxy saiti.
Kufara kwakachengeteka kubhurawuza!
Kushandisa sei Windows 10 SOCKS5 proxy marongero
Nzira Yokuwana UK IP IP Address Kubva Ipi Nyika
Nzira Yokuwana Jepan IP IP Address Kubva Ipi Nyika
Tsvaga Kunze Webhusaiti Uchishandisa Kamera, Microphone Uye Nzvimbo Mune Edge Browser
Nzira Yokuvanza Nayo IP Address
Posted in bing app for ios